About Us - Foshan Fumei aikwana Co., Ltd
School dhesiki chair
boka redu vamwe nyanzvi, yepamusoro zvakanaka uye kukura netsvimbo. Vanozvipira chokuvandudza uye kuona chigadzirwa unhu yacho, updating chigadzirwa manyorerwo uye magadzirirwo kuti kambani yedu kuenda mberi. Vanova nechokwadi chokuti zvinhu zvedu zvose achatumirwa mutengi pamwe yepamusoro nokukurumidza.
Tine vamwe mumhuri webazi Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Ha'erbin, Jilin, Shandong, Zhengzhou, Suzhou, Fujian, Wuhan etc. zvigadzirwa edu Export kuna America, Australia, Russia, Middle East, Africa, South East Asia nedzimwe nyika.
Kuramba Kusimbisa chipo uye kutarisira ramangwana, tizere chivimbo uye akamisa refu kukura chirongwa tariro pachokwadi pamwe shamwari munyika yose, kuti vabudirire takunda zvisamumirira chido nokuda zvose iwe neni . We kusarudza kuti pamwe vatengi zvitsva nezvitsaru kusika remakore okuberekwa nheyo uye penya ramangwana.